AMISOM oo Beenisay Wararka Sheegaya in dad shacab ah ku laayeen duleedka Muqdisho | SAHAN ONLINE
AMISOM oo Beenisay Wararka Sheegaya in dad shacab ah ku laayeen duleedka Muqdisho
MUQDISHO – Afhayeenka Ciidanka AMISOM Wilson Rono ayaa beeniyey warar lagu faafiyey baraha bulshada oo sheegayey in dad badan ku laayeen duleedka magaalada Muqdisho kaddib markii ciidankooda lagu qaaday weerar qarax iyo iska horimaad toos ah.
Wilson Rono oo la hadlay wakaaladda wararka ee SONNA ayaa sheegay in weerarkaas uu uga dhintay hal askari,halka mid kale uu ku dhaawacmay.
Sidoo kale waxa uu xusay in weerarka laba ruux ku geeriyoodeen weerarka.
Kolonyo ciidamadeena oo marayay meel u dhow degmada Afgooye ayaa waxay la kulmeen qarax iyo dagaal toos ah, iyadoo ciidamada ay sameeyeen iska caabin, hal askari ayaa dhinacayaga naga dhintay…” ayuu yiri Wilson Rono
Warbaahinta maxaliga ah iyo kuwa baraha bulshada ayaa lagu baahiyey warar sheegaya in AMISOM ay dad badan oo shacab ah ku dileen deegaanka Lafoole.
Ilo madax banaana waxa ay sheegeen rasaas ay fureen Ciidamada AMISOM ay dad rayid ah waxyeelo kasoo gaartay,kaddib markii qarax lala eegtay.
Wariye u shaqeynayey Idaacad maxali ah oo ku taal degmada Afgooye oo lagu magacaabo Jacfar Cali Daacad oo macalin ka ahaa Iskuul ku yaala Lafoole ayaa kamid ahaa dadkii ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada AMISOM.
Ciidamada AMISOM ayaa marar badan weerar lagu qaaday taasoo dhanka kale waxyeelo kasoo gaarto dad shac ah.